Wax ka ogow ixxsaha goolhaye Alisson iyo Kooxda,,,, - Jubbaland TV
Wax ka ogow ixxsaha goolhaye Alisson iyo Kooxda,,,,
By admin July 12, 2018 514
Wararka imaanaya Caasimada dalka Talyaaniga ayaa sheegaya in Kooxda Kubada Cagta ee Liverpool aysan marnaba u dhaqaaqi doonin saxiixa goolhayaha Kooxda AS Roma Alisson Becker.
Kooxda Giallorossi ayaa iska laashay qiimo dhan £53-milyan oo ginni oo sidoo kale ay dheertay lacag dhan £5-milyan oo dib logu dari doono Kooxda Roma, kaddib wax qabadka ololihiisa kowaad ee Reds.
David Maddock oo wax ku daabaca Jariirada Daily Mirror ayaa sheegay in Kooxda kasoo jeeda gobolka Merseyside ay isaga hartay raacdadii ay kal hore ugu jirtay in ay hesho saxiixa Cayaariyahanka, hase ahaatee hada u muuqata mid isaga hatay.
Si kastaba ha ahaatee’ Kooxda boqorada Cad_cadka ee Real Madrid ayaa hada u muuqata mid kali ku noqon doonta adeega goolhaye Alisson Becker, si ay bedel uga dhigto Keylor Navas.
Waa sidee xaalada Chelsea iyo saxiixyada suuqa’ City oo wali ku degen Cayaariyahan London u jooga Caafimaadka
RASMI: Cayaariyahan Jean-Michael Seri oo ku biiray Kooxda kasoo jeeda Galbeedka London
RASMI: Arsenal Oo Dhamaystirtay Saxiixa Daafaca kooxda….
Juventus oo ka fekeraysa mustaqbalka qaar ka mid ah Xiddigaheeda